ချစ်သူရဲ့ဆံနွယ်အရှည်တွေဟာ ကိုကိုပုရိသတို့အတွက်တော့ စိတ်ကူးယဉ်ပန်းခင်းကြီးပါပဲ…. - Lupyo News
ချစ်သူရဲ့ဆံနွယ်အရှည်တွေဟာ ကိုကိုပုရိသတို့အတွက်တော့ စိတ်ကူးယဉ်ပန်းခင်းကြီးပါပဲ….
ချစ်သူရဲ့ဆံနွယ်အရှည်တွေဟာ အမျိုးသားတွေအတွက်တော့ လဲလျောင်းချင်စရာ နူးညံ့လွန်းတဲ့ ကတ္တီပါကောဇောတစ်ခုပါပဲ။ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ဆံနွယ်ရှည်တွေကို ကိုကိုတို့ဟာ ကာယကံရှင် တွေထက် တောင် ပိုပြီးသည်းသည်းလှုပ်တတ်ကြပါသေးတယ်။ ဆံပင်ဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဒုတိယမျက်နှာပြင်ပါ လှပလွန်း တဲ့ ကေသာတွေဟာ အမျိုးသားတွေရဲ့အချစ်ကို ဆွဲဆောင်ဖို့ 80% လုံလောက်ပါတယ်။
ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ထက်ကိုယ့်ရဲ့ဆံပင်ကိုပိုပြီး ချစ်နေတယ် ဆိုရင် ပျိုမေတို့အနေနဲ့ စိတ်မဆိုးပါနဲ့။ ဒါဟာပျိုမေတို့ကိုချစ်လို့ ပျိုမေတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေးတွေအကုန်လုံးကို ချစ်တဲ့သဘောပါပဲ။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ ချစ်စရာ အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းလေးကို ကိုကိုတို့အနေနဲ့ တန်ဖိုး ထားမြတ်နိုးတယ်ဆိုတာ သဘာဝပါပဲ။ ကိုယ့်ချစ်သူလေးကို တန်ဖိုးထားတဲ့ အပြင် သူ့ရဲ့ဆံနွယ်တွေကိုပါ ဂရုစိုက်ဖို့ဆိုတာ တော်ရုံမြတ်နိုးမှုနဲ့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆံပင်တွေကိုတန်ဖိုးထား တဲ့ ကိုကိုတွေကိုပိုချစ်ပါ။
လှပလွန်းတဲ့ဆံနွယ်ရှည်တွေဟာ ကိုကိုပုရိသတို့ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ် ပန်းခင်းကြီးပါပဲ။ အမျိုးသားအများစု ဟာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဆံနွယ်တွေကို အဓိကထားပြီး လေ့လာတတ်ကြပါတယ်။
ဆံပင်ရှည်ရှည်နဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ပိုပြီးချစ်ခင်စုံမက်တတ်ကြပြီး သူမတို့ရဲ့ဆံနွယ်ကိုလည်း ဂရုတစိုက်ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ကိုကိုတို့ရဲ့ ကတ္တီပါကော်ဇောလည်းဖြစ် စိတ်ကူးယဉ်ပန်းခင်းကြီး လည်းဖြစ်တဲ့ ပျိုပျိုမေတို့ရဲ့ ဆံနွယ်ရှည်လေးတွေကို ဂရုတစိုက် ထားဖို့ အကြံပေးလိုက်တယ်နော်။
ခဈြသူရဲ့ဆံနှယျအရှညျတှဟော ကိုကိုပုရိသတို့အတှကျတော့ စိတျကူးယဉျပနျးခငျးကွီးပါပဲ
ခဈြသူရဲ့ဆံနှယျအရှညျတှဟော အမြိုးသားတှအေတှကျတော့ လဲလြောငျးခငျြစရာ နူးညံ့လှနျးတဲ့ ကတ်တီပါကောဇောတဈခုပါပဲ။ ကိုယျ့ခဈြသူရဲ့ဆံနှယျရှညျတှကေို ကိုကိုတို့ဟာ ကာယကံရှငျ တှထေကျ တောငျ ပိုပွီးသညျးသညျးလှုပျတတျကွပါသေးတယျ။ ဆံပငျဆိုတာ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ဒုတိယမကျြနှာပွငျပါ လှပလှနျး တဲ့ ကသောတှဟော အမြိုးသားတှရေဲ့အခဈြကို ဆှဲဆောငျဖို့ 80% လုံလောကျပါတယျ။
ကိုယျ့ခဈြသူက ကိုယျ့ထကျကိုယျ့ရဲ့ဆံပငျကိုပိုပွီး ခဈြနတေယျ ဆိုရငျ ပြိုမတေို့အနနေဲ့ စိတျမဆိုးပါနဲ့။ ဒါဟာပြိုမတေို့ကိုခဈြလို့ ပြိုမတေို့နဲ့သကျဆိုငျတဲ့ အစိတျအပိုငျးလေးတှအေကုနျလုံးကို ခဈြတဲ့သဘောပါပဲ။
ခဈြစရာကောငျးတဲ့ကိုယျ့ခဈြသူရဲ့ ခဈြစရာ အကောငျးဆုံးအစိတျအပိုငျးလေးကို ကိုကိုတို့အနနေဲ့ တနျဖိုး ထားမွတျနိုးတယျဆိုတာ သဘာဝပါပဲ။ ကိုယျ့ခဈြသူလေးကို တနျဖိုးထားတဲ့ အပွငျ သူ့ရဲ့ဆံနှယျတှကေိုပါ ဂရုစိုကျဖို့ဆိုတာ တျောရုံမွတျနိုးမှုနဲ့မရပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ဆံပငျတှကေိုတနျဖိုးထား တဲ့ ကိုကိုတှကေိုပိုခဈြပါ။
လှပလှနျးတဲ့ဆံနှယျရှညျတှဟော ကိုကိုပုရိသတို့ရဲ့ စိတျကူးယဉျ ပနျးခငျးကွီးပါပဲ။ အမြိုးသားအမြားစု ဟာ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ဆံနှယျတှကေို အဓိကထားပွီး လလေ့ာတတျကွပါတယျ။
ဆံပငျရှညျရှညျနဲ့ အမြိုးသမီးတှကေို ပိုပွီးခဈြခငျစုံမကျတတျကွပွီး သူမတို့ရဲ့ဆံနှယျကိုလညျး ဂရုတစိုကျရှိတတျကွပါတယျ။ ကိုကိုတို့ရဲ့ ကတ်တီပါကျောဇောလညျးဖွဈ စိတျကူးယဉျပနျးခငျးကွီး လညျးဖွဈတဲ့ ပြိုပြိုမတေို့ရဲ့ ဆံနှယျရှညျလေးတှကေို ဂရုတစိုကျ ထားဖို့ အကွံပေးလိုကျတယျနျော။
မိန်းကလေးများ အထူး ဖတ်သင့်တဲ့ သံပုရာသီး အစွမ်းအံ့မခန်းအစွမ်နှင့် အသုံးပြုနိုင်သောနည်းလမ်းကောင်းများ
ပျိုမေတို့ ညအိပ်ရာ ဝင်ခါနီးတိုင်း လုပ်ပေးသင့်တဲ့ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းနည်း(၅)မျိုး